अनुदानमा अध्यक्षको सेटिङ्ग: जनतासँग आवेदन माग, पालिका कै कर्मचारीको खल्तीमा १५ लाख ! - Kantipath
अनुदानमा अध्यक्षको सेटिङ्ग: जनतासँग आवेदन माग, पालिका कै कर्मचारीको खल्तीमा १५ लाख !
कांग्रेसबाट निर्वाचित पालिका अध्यक्ष !
बिहिबार चैत्र ३, २०७८
दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले दिएको रकम गाउँपालिकाको बैठकले आसेपासे छानेर वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कांग्रेस निकट कर्मचारी खड्ग बहादुर खत्रीलाई २०७८ फागुन २५ गते पालिका स्तरिय निर्णय गर्दै रकम सहयोग गरेको हो ।
लामा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए भने हाल उनी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला उप-सभापति छन्। कान्तिपथलाई विशेष स्रोत मार्फत प्राप्त भएको उक्त बैठकको माईन्युट अनुसार उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्य र वडा नं ८ का अध्यक्ष रमेश कुमार अधिकारीलले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
उनले प्यान दर्ता पनि २०७८ सालको श्रावण २५ गते मात्र गरेका छन्, यति छोटो समयमा नै दर्ता गरेर अनुदान थाप्ने खत्रीलाई कांग्रेस जिल्ला उपसभापति लामाको राम्रै आशिर्वाद मिलेको देखिन्छ ।
माईन्युटको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वितिय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ अनुसार उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि डाङ्गडुङ्गेश्वरी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मलाई कृषि समितिको सिफारिसमा सो फर्मको आवेदनलाई स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ । फर्मको आवेदन स्वीकृत भएपनि पालिका भित्रबाट नै विरोध हुन थालेपछि डाङ्गडुङ्गेश्वरी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मले १५ लाखको लागि सम्झौता गर्न पाएको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस: ऋण नतिर्दा गाउँपालिका अध्यक्षलाई फसाद: पत्रिकामा छापियो फोटो र जग्गा लिलाम गर्ने चेतावनी !
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त फर्मको प्रमाण-पत्र दर्ता नं ३७२५/०७९/०७९ रहेको छ जसका संचालक हुँ पालिका कै कर्मचारी बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नं ८ निवासी खड्गबहादुर खत्री। फर्म दर्ता गर्दा उनले फलफुल तथा तरकारी खेति, गाईभैंसी, कुखुरा पालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरेका छन् । उनले प्यान दर्ता पनि २०७८ सालको श्रावण २५ गते मात्र गरेका छन्, यति छोटो समयमा नै दर्ता गरेर अनुदान थाप्ने खत्रीलाई कांग्रेस जिल्ला उपसभापति लामाको राम्रै आशिर्वाद मिलेको देखिन्छ । जबकी खत्री कै वडा अध्यक्ष रमेश कुमार अधिकारीले भने बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा कान्तिपथले गाउँपालिकामा बुझ्दा लेखा अधिकृत गोबिन्द बुढाथोकीले निर्णय भएको तर सम्झौता भै नसकेको जानकारी दिए ।